माइला लामाको पत्र : छानोमा आगो झोस्ने बिदेशीका नोकर बिरुद्ध निर्मम बनौं::देश र जनताप्रति समर्पित
माइला लामाको पत्र : छानोमा आगो झोस्ने बिदेशीका नोकर बिरुद्ध निर्मम बनौं
मेरा आदरणीय र आत्मीय प्रियजनहरू न्यानो अभिवादन !
हाँसम्म फागुन १० को घटनामा सिंहबहादुर गुरुङजीको मृत्युको सन्दर्भ छ, त्यो एकदमै कारुणिक, पीडादायी र दुःखद् दुर्घटना हो । मैले पाएको जानकारीअनुसार मानवीय क्षति पु¥याउने पार्टीको योजना थिएन । मलाई यही घटनासँग जोडेर जेल पठाइएको छ । जब कि म त्यो समयमा नवलपुर जिल्लाको पहाडी गाउँ बुङ्दीकालिका गाउँपालिकाका गाउँहरूमा क्षितिज परिवार र सामना परिवारका कलाकारहरूसहित सङ्गठनात्मक अभियानमा थिएँ उदयको नाउँबाट । यस विषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्न त्यहाँका पालिकाप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रहरी अधिकृतसँग पनि सूचना लिन सक्छ । गुरुङ बन्धुको निधन निधन एकदमै अकल्पनीय र अनपेक्षित घटना हो र यस सवालमा म पार्टीको एक जिम्मेवार कार्यकर्ता भएकाले यदि गुरुङ परिवारले हदैसम्मको सजाय माग गर्नुहुन्छ भने यो पङ्क्तिकार खुलामञ्चमा फाँसीको तख्तामा लट्किन पनि तयार छ । किनकि नवलपुरको पाखामा जनतासँग नाच्दैगाउँदै गर्दा जब मैले त्यो भयङ्कर दुःखदायी घटना सुनेँ, मेरो मुटु नराम्ररी निचोरिएको थियो । मन शोकाकुल बनेको थियो भने भने उहाँको परिवारलाई त्यसले कति गहिरो पीडा दियो, म त्यसको गहिराइ बुझ्दछु । यहाँ हाम्रा क्षमायाचनाले उहाँको मनमा शान्ति छाउँदैन । त्यसैले मैले फासीको कुरा गरेको हुँ ।
माफ गर्नुहोला पत्र लामो भएकोमा, देश र जनताको मुक्तिको सपना पूरा गर्नु राजनीतिमा होमिएको नै ३० वर्ष बितिसकेछ । जनयुद्धभित्र एउटा महान् राष्ट्र र समृद्ध जनताको सपना देखेर मैले रगत पोखेँ । मृत्युको मुखबाट प्रिय कमरेडहरू र मेरा आदरणीय डाक्टरहरूले ठूलो सङ्घर्ष गरेर मलाई फिर्ता ल्याउनुभयो । श्रवणक्षमता कमजोर भएको, कान र दृष्टि क्षमता ह्रास भएको घाइते जीवन सहिदका अधुरा सपना अनि माटोको आह्वान पूरा गर्न लडिरहनेछु । जब जीवनमा गुमाउन बाँकी नै केही छैन भने जेल र मृत्युले हामीलाई तर्साउन सक्दैन । हराउन सक्दैन ।
मलाई यतिबेला जनयुद्धमा सँगसँगै काँध जोडेर लडेका, सँगै गाएका कमरेडहरूको सम्झनाले सताइरहेछ । जो आज जहाँ भए पनि नजिक छौँ र सम्झनाको तीव्रता जेल बसाइमा घनीभूत हुँदो रहेछ । विगतका घटनाहरूमा हराउँदा पनि रोमाञ्चक पनि हुँदोरहेछ । म अपिल गर्छु हामी अझ गाढा सम्बन्धमा आउनुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपाभित्रका इमानदार, प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी र देशभक्तहरूको साथ पाएका छौँ । यसमा गर्व लागेको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यवसायी, पत्रकार जो मुटुमा माटोको सुगन्ध सजाएर एउटा उज्यालो भविष्यको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, हामी यात्रामा सँगसँगै हुनुपर्छ ।
जबसम्म हामीले धर्ती आमाको छातीबाट अतिक्रमणकारी बुट हटाउने छैनौँ, घरभित्रै लुकेर घरको छानोमा आगो झोस्ने विदेशीका षड्यन्त्रकारी नोकरहरूलाई दण्डित गर्नेछैनौँ, तबसम्म हाम्रो सहयात्रा अनिवार्य छ । यसका लागि हामीले भन्यौँ– ‘क्रान्ति’ अर्थात् अधिकार सम्पन्न र समृद्ध नेपाली जनता र स्वाभिमान हाम्रो मुलुक । जहाँ हामी शिर ठाडो गरेर बाँच्न सक्नेछौँ । यसका लागि हाम्रो सहयात्रा जरुरी छ । तपाईंहरूको साथ जरुरी छ । हाम्रा कमजोरीहरूमा तपाईंहरूको तिखो खबरदारी पनि जरुरी छ । आउँदा दिनहरूमा बन्द पर्खालभित्रबाट प्रेषित हुने पत्रहरूमा भेट्ने सङ्कल्पसहित बिदा चाहन्छु ।
माइला लामा लाइ पत्र ! जेलको मोर्चा सम्हाल्नुस, बाहिर जनमुक्ति सेनाले प्रतिरोध गर्नेछ
माइला लामा घाइते हुदाको जनयुद्धकालिन कारुणिक दृश्य……